Tsipahin’ny Freedom ny fanendrena filoham-pokontany | NewsMada
Tsipahin’ny Freedom ny fanendrena filoham-pokontany
« Anisan’ny vaindohan-draharahanay izao ny ady ho tsy fanekena ny fitadiavan’ny fitondrana handrombaka ny fahefan’ny vahoaka ka hanendry ny filohan’ny fokontany raha tokony ny eny ifotony no hifidy ny ho filohany », hoy ny filohan’ ny Freedom, Rakotondrazafy Lalatiana, omaly tetsy 67 ha. Nohitsiny fa fanitsakitsahana ny demokrasia sy ny lalàmpanorenana izany. Ho azy ireo, tokony hofidina ny filoham-pokontany.
Mitaky ny mangaraharaha momba ny fifidianam-paritra kasain’ny fitondrana hatao amin’ny volana jona koa ny Freedom. Nambarany fa tokony hazava ny fitsipi-dalao. « Manjavozavo ny lalàna. Efa karazan’ny kajikajy politika izao », hoy ihany izy.
Nanamafy koa ny tenany fa azo irosoana ny fifidianana mialoha ny fotoana raha miainga amin’izao mahazo ny vahoaka izao. « Tokony hihaino ny mpitondra fa tsy ho lany andro amin’ny adilahy politika, tsy mampandroso… », hoy izy.
Tsiahivina fa notokanana tamin’io fotoana io ny foibe fanofanana ho an’ny vehivavy iharan’ny herisetra, iarahana amin’ny Freedom sy ny UNMDH.